प्लेटलेट्स चढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो आग्रह
मंसिर १३, काठमाडाैं । आजका पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सम्बन्धित समाचार प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्लेटलेट्स चढाइएको समाचार छापेको छ । एपेन्डिक्सको शल्यक्रियापछि तीन दिनदेखि आईसीयूमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार प्लेटलेट्स चढाइएको हो ।
यसबारे अस्पतालले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिए पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार शल्यक्रिया र डायलसिसका कारण ओलीलाई प्लेटलेट्स चढाउनुपरेको हो । प्लेटलेट्स रगतमा रहने एक प्रकारको कोषिका हो, जसले घाउ वा चोटपटक लाग्दा रगतलाई बग्नबाट रोक्छ । साथै क्षतिग्रस्त तन्तुलाई ठीक पार्न सघाउँछ ।
चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई डायलसिसको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेको छ । २४ घण्टामा १०० देखि १५० मिलिलिटर पिसाब भइरहेको उल्लेख गर्दै एक चिकित्सकले भने, ‘डायलसिसको आवश्यकता अब झन् बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई मंगलबार र बुधबार आईसीयूमै कन्टिन्युअस रेनल रिप्लेसमेन्ट थेरापी (अत्यन्त कमजोर बिरामीहरूलाई गरिने विशेष प्रकारको डायलसिस) गरिएको थियो । चिकित्सकहरूका अनुसार बिहीबार राति वा शुक्रबार पुनः डायलसिस गरिनेछ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले पनि प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यबारे समाचार छापेको छ । चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे सबै कुरा बोलिदिन चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण लेख्छ- आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधारलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली जिज्ञासु हुन थालेका छन् । उपचार टोलीका संयोजक डा. अरुण सायमीसँग उनी सोध्छन्, ‘के छ खबर ? मिडियामा केके आइराछन् ?’ डा. सायमीले सामान्य ब्रिफिङ गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको ठट्टा चल्छ ।
अन्नपूर्ण थप लेख्छ- प्रधानमन्त्रीसँग सामान्य कुराकानी भइरहेका बेला बुधबार एक सञ्चारकर्मीको फोन आयो । ती सञ्चारकर्मीले आरोप लगाए, ‘तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे कुरा लुकाउनुभयो ।’ डा. सायमीले सबै कुरा सार्वजनिक भएको स्पष्ट पार्दै प्रतिवाद गरे । दुई जनाको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबै कुरा बोल्दिनुस् । जे भइरहेको छ, जवाफ दिनुस् ।’
कान्तिपुरका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ अस्पतालमा पुगी प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी लिएकी छन् । राष्ट्रपतिलाई चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारीगराएका थिए । जानकारी लिने क्रममा राष्ट्रपति करिब आधा घण्टा अस्पतालमा रहेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केपछि उनले ओलीको स्वास्थ्यस्थितिमा भइरहेको सुधारप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेकी छन् ।
अन्नपुर्णका अनुसार वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. सायमी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सघन उपचार कक्षमा ठट्टा चल्ने गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाहिरी हालखबर सोध्न मन पर्छ। जवाफमा डा. सायमी ‘जोक’ गर्छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी चिकित्सक त होइन तर २५ वर्षदेखि उहाँको स्वास्थ्य हेर्दै आएको छु। आपसमा जोक हुन्छ।’
निकट सम्बन्धका कारण ओलीले बाहिर के भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्दा आफूले उपनिर्वाचनको अवस्था बुभ्mन र दशरथ रंगशाला जान मन लागेको हो ? भन्दै ठट्टा गरेको उनले सुनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंगलबार बिहान आकस्मिक उपचार कहाँ गराउने भन्ने छलफलमा डा. सायमीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। डा. सायमीकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि मनमोहन सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो। सायमी सेन्टरमा कार्यरत भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई अन्यत्र लगिएन।
प्रधानमन्त्रीको मंगलबार शल्यक्रियापछि रेनलथेरापी र बुधबार नियमित डायलासिस भइरहेको जानकारी सेन्टरबाट दिइएको छैन। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यबारे केही लुकाउनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ’, डा. सायमीले भने।